Uncategorized – Hi Internet of Horizon Telecom International
Hi Internet of Horizon Telecom International
09 9666666 44
လုပ်ငန်းသုံး DIA Internet
ဝိုင်ဖိုင် နှင့် ခဲခြစ်ကဒ်များ
Domestic Private Leased Circuits
Hi App and Portal
System Update Hi-Internet ကိုအသုံးပြုနေကြသော Customers များ ခင်ဗျာ…. Hi-Internet အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်ရန်အတွက် DATA CENTER တွင် အဆင့်မြင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် 14/6/2022 အင်္ဂါနေ့ည ၁၀နာရီ မှ 15/6/2022 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် ၆နာရီ အတွင်း ယာယီလိုင်း ပြတ်တောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် 15/6/2022 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက် ၆ နာရီ နောက်ပိုင်းအထိ အင်တာနက်လိုင်းပြန်လည်မရသေးပါက မိမိတို့စက် ကို Power အပိတ် အဖွင့် ပြုလုပ်ကာ ပြန်လည်အသုံးပြုပေးပါခင်ဗျာ။ လိုအပ်ပါက Hotline 09 966 666 644 သို့ဖြစ်စေ၊ Hi-Internet Page Messenger သို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်၍ အကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ […]
လူကြီးမင်းတို့အခက်အခဲတွေကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးမဲ့ Hi Internet Application အသစ်………….. Hi Internet application အသစ်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Bill စနစ်ပါရှိပြီး Application ကနေတဆင့် ဘေလ်ပေးဆောင်ပါက အင်တာနက်လိုင်း ချက်ချင်းပွင့်မဲ့ System ကိုလဲ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဒါအပြင် လူကြီးမင်းတို့အခက်အခဲတွေကို Application ကတဆင့် လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ Complain တင်နိုင်ပြီး မိမိ Complain အခြေအနေကိုလဲ Notification ကနေတဆင့် အသိပေးနေအုံးမှာမို့ ပိုမိုအဆင်​ပြစေမှာပါ။ Application password ကိုလည်း ပြောင်းလဲနိုင်မာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိ information ကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီမို့ Hi Internet application အသစ်ကို အခုပဲ Download လုပ်လိုက်ကြရအောင်။ Download ရယူရန် >>> […]
Hi Internet Bill SMS အား ၄ရက်နေ့တွင်ပေးပို့သွားပါမည်။ ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသော Hi Internet သုံးစွဲသူများခင်ဗျာ Hi Internet ၏ Bill system အား Customer များ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြောင်းလဲထားပါသောကြောင့် ဘေလ်တောင်းခံလွှာ SMS ကို February-4 ရက်နေ့မှ စတင် ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Customer များ အနေဖြင့် Feb-4ရက်နေ့မှ စပြီး ယခင်ပေး‌ဆောင်နေသော Payment Channel များအတိုင်း ဆက်လက်ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ G&G, City Express, City mart တို့တွင် 123 Service ဖြင့် ပေးဆောင်ခြင်းအား 09-02-2022 မှ စတင်ပေးဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Feb […]
Hiring Content Writer Hiring Content Writer ကျား/မ – (၁ ဉီး) post Job Description -Content Writingနှင့်ပတ်သက်သော creative ideaကောင်းကောင်း ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး Content Planများကို အချိန်မှီ တင်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ -Social Media Content Calendar ရေးဆွဲလုပ်ကိုင် နိုင်ရမည်။ -Graphic Designerနှင့် ပူးပေါင်း၍ Contentများ စီစဉ်ရေးသား နိုင်ရမည်။ -Facebook Page/Ads Manager ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။ -Facebook Messengerနှင့် Commentများကို replyလုပ်ပေးနိုင်ရမည်။ Job Requirements -တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ (သို့) Degree တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ၊ ကျောင်းဆက်မတက်သူ ဖြစ်ရမည်။ -Contentနှင့် ပတ်သက်သော […]
MS-2 Tower, Upper Mandalay Road, Kandawgyi Yeik Mon, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
@ 2021 Copyright by HTI. All Rights Reserved.
Facebook-f Viber Youtube Telegram